Maxay odayaashii ka baxay Baydhabo ee tegay Iidaale kala hadleen Al-Shabaab? – Hornafrik Media Network
Daawo: Wasiir Fowziya oo cabasho ka ah siyaasiyiin caqabad ku noqday shaqada…
Cali Cosoble oo qoraal lama filaan ah soo saaray – Ma isbedelay mowqifkiisii dhismaha…
Maxay odayaashii ka baxay Baydhabo ee tegay Iidaale kala hadleen Al-Shabaab?
By Liibaan Nuur	 On Jan 11, 2020
Qaar ka mid ah ganacsatada deegaan ahaan ka soo jeeda gobolada Bay iyo Bakool ee Koonfur Galbeed, gaar ahaan degmooyinka Diinsoor, Qansax-Dheere, Waajid iyo Xudur ayaa shalay deegaanka Iidaale kulan kula qaatay saraakiil ka tirsan Al-Shabaab waxayna kala hadleen sidii go’doonka looga qaadi lahaa deegaanadaas.
Al-Shabaab ayaa ganacsatada ka dalbaday lacag dhan 300,000 oo kun (Sedax boqool kun oo dollar), si ay go’doonka uga qaadaan.
Ganacsatadaan ayaa inta aysan aadin Al-shabaab waxay la kulmeen xubna ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, iyaga oo u sheegay inay u tagayaan Al-Shabaab, isla markaana kala hadlayaan sidii go’doonka looga qaadi lahaa deeganada maamulkaas.
Wararkii ugu dambeeyey ee aan ka heleyno aritaas waxay sheegayaan in ganacsadii la kulantay Al-Shabaab ay dib ugu laabteen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, halkaas oo markii hore ay ka amba-baxeen, mana jirto wax ay isla soo meel dhigeen iyaga iyo Al-Shabaab, sida aan xogta ku heleyno.
Puntland oo shaacisay tirada guud ee dembiyadii sanadkii 2019-ka
Boqor cusub oo looga dhawaaqay dalka Cuman